Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » ISpain Iindaba Eziphambili » Isiqithi saseCanary saseLa Palma ngoku yindawo yentlekele
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Safety • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Isibhengezo sommandla wentlekele siza kuvumela urhulumente waseSpain ukuba enze izigidi zeerandi kwimali zikarhulumente ezikhoyo ukuxhasa amanyathelo kaxakeka eLa Palma, kwaye abahlali besiqithi abachukunyiswe ngumsebenzi wentaba-mlilo oqhubekayo uyaqhubeka nokusonakalisa esi siqithi.
Isiqithi saseSpain Canary Islads 'iLa Palma silindele ilifu elinokuba yityhefu kwintaba-mlilo.
Urhulumente waseSpain uthembisa izigidi ngenkxaso njengoko intaba-mlilo iqhubeka ngokutshabalalisa iLa Palma.
Ngoku, izigidi kwizibonelelo zikarhulumente zinokukhululeka ukuxhasa amanyathelo kaxakeka eLa Palma, kunye nezo zichaphazeleka kukuqhuma.
Urhulumente waseSpain ukhuphe isibhengezo namhlanje, evakalisa ngokusemthethweni i Canary Islands'La Palma, ehlala kunxweme loMntla Afrika,' indawo yentlekele '.
Isibhengezo sommandla wentlekele siza kuvumela i Urhulumente waseSpain ukwenza izigidi zeerandi kwimali zikarhulumente zifumaneke ukuxhasa amanyathelo kaxakeka eLa Palma, kwaye abahlali besiqithi abachukunyiswe ngumsebenzi omkhulu wentaba-mlilo uyaqhubeka nokusonakalisa esi siqithi.
Ngoku ka Urhulumente waseSpain Isithethi, urhulumente wabele iphakheji yokuqala ye- $ 10.5 yezigidi ($ 12.30 yezigidi) ngoncedo lwezezimali kuLa Palma.
Iphakheji ibandakanya i-5 yezigidi zokuthenga izindlu, ngelixa enye imali iya kwabelwa ukuthenga ifanitshala kunye nezinto eziyimfuneko ekhaya emva kokuba amawaka efuduswe.
ILava iyaqhubeka nokuhamba ivela kwiCumbre Vieja volcano eyaqala ukuvulwa ngoSeptemba 19 emva kwamashumi eminyaka yokungasebenzi, itshabalalisa phantse izindlu ezingama-600 kunye neecawe namasimi ebhanana Isiqithi saseCanary ithandwa kakhulu ngabakhenkethi.